संसदमा नेकपाका झपट रावल : बोल्न नाम टिपाए, रोष्ट्रममा पुगेर चुप !
काठमाडौँ - मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एउटा अचम्मको दृश्य देखियो । बोल्ने कुरा केही नभएको भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावल रोष्ट्रममा चुपचाप उभिए ।
संघीय संसदको मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक कार्यक्रममाथि छलफलका भइरहेका बेलामा रावल करीव घरी तल, घरी माथि हेर्दै उभिइरहे ।
६ मिनेट समय दिएको भन्दै सभामुखको कुर्चीमा बसेकी राधा ज्ञवालीले रोष्ट्रममा बोलाएपछि रावल आए । 'सम्माननीय सभामुख महोदय, म मूलतः यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रमका बारेमा बोल्न चाहन्छु ।' यति भनेपछि उनी ठप्प भए । दायाँ-बायाँ, तल-माथि हेरे तर चुपचाप ।
बोल्न चाहन्छु भनेर चुपचाप उभिएपछि संसदमा उपस्थित अन्य सांसदहरू अचम्म माने । कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाल हाँस्न थाले ।
एकमिनेट बित्नै लाग्दा ज्ञवालीले 'माननीय ज्यू के भयो ?' भनेर सोधिन् । रावलले घडी हेर्दै भने, 'केही नभएकाले सभामुख महोदय, नबोलेको ।' रावलले पुनः मौनधारण गरे । एकछिनपछि ज्ञवालीले ‘यसरी समयको सदुपयोग भएन कि माननीयज्यू ?’ भनेर सोधिन् ।
रावलले भने, 'त्यो किताबमा नअटेको हुनाले सभामुख महोदय !' त्यसपछि रावल पुनः चुपचापको स्थितिमा फर्किए । त्यसपछि ज्ञवालीले सांकेतिक विरोधको ध्यानाकर्षण भइसकेको बताइन् । रावलले शालीन स्वरमा भने, 'सभामुख महोदय, भए पो बोल्नु !' अनि रावलले एकपटक फेरि घडी हेरे ।
‘मै खाउँ मै लाऊँ सुख सयल मोजभाब म गरुँ, मै बाँचु मै नाचुँ अरु सबै मरुन् दुर्बलहरु’ रावल यी पंक्तिसँगै खुले । उनले शहरी विकासको सबै बजेटलाई मन्त्री ईश्तियाक राईले आफ्नो जिल्ला बाँकेको निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको आरोप लगाए ।
कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ का सांसद रावलले कैलाली र कञ्चनपुरमा केही दिनअघि गएको हावाहुरीले घरबारविहीन बन्न पुगेका र वादी समुदायहरुले जमिनलाई डसना र आकाशलाई सिरक बनाउन बाध्य हुनुपरेको तर मन्त्री राईले आफ्नै बाँकेको निर्वाचन क्षेत्रमा एकलौटी खन्याएको आरोप लगाए ।
साथै रावलले मन्त्रीको योग्यता देखेर आफूलाई दया लागेको भन्दै व्यंग्य गरे ।
कांग्रेसको प्रश्न : पञ्चायतका मण्डले र दुईतिहाइका अरिंगाल एकै हुन् ?